Myat Shu - 2013 January
You are here : Myat Shu » Archives for January 2013
မခံနိုင်အောင် ပေါ့ပါး ဘ၀ နေ့ ညများ (၂)
Published By Myat Shu On Monday, January 28th 2013. Under ဘာသာပြန်, မျက်ရှု
(၆) တောမတ်နဲ့ အပျော်တွဲမိန်းမတွေနဲ့ကြားမှာ နားလည်မှု တစ်ခုတော့ထားရသည်။ သူ့ အနေနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ချစ်လို့တော့မရ၊ ဒီစည်းမျဉ်းကို ချိုးဖောက်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်းပဲ တခြားမိန်းမတွေက သိမ်ငယ်စိတ်နဲ့ သူ့ကို ပြဿနာရှာကြတော့မည်။ ဒီစည်းမျဉ်းအရ ထရီဇာနဲ့ သူ့ရဲ့ လေးလံလှတဲ့ ခရီးဆောင်အိတ်ကြီးအတွက် အခန်းတစ်ခန်းတော့ ငှားပေးရသည်၊ သူမကို သူစောင့်ကြည့်ပေးချင်သည်။ ကာကွယ်ယ်ပေးချင်သည်။ သူမ ရှိနေတဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်မှုရချင်သည်၊ သို့သော်လည်း ဒီ့အတွက်တော့ သူ့ရဲ့ နေပုံထိုင်ပုံကို ပြောင်းစရာမလိုဘူးလို့ ခံစားမိသည်။ သူမကိုလည်း သူ့ဆီမှာအိပ်နေတဲ့အချိန် ထွက်သွားဖို့ မပြောရက်၊ ညတာကို အတူကုန်ဆုံးစေခြင်းမှာ ချစ်ခြင်း၏ သက်သေအထောက်အထားပင်။ သူက ဘယ်သူနဲ့မှ ညအိပ်လေ့မရှိ၊ သူက သူတို့ဆီသွားတဲ့အခါတော့ ကိစ္စမရှိ၊ သူပြန်ချင်သည့်အချိန် ပြန်ရုံပင်၊ သူ့နေရာမှာ ဆိုရင်တော့ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Friday, January 25th 2013. Under ၀တ္ထု, Myat Shu eZine, မျက်ရှု
တစ်နေ့တာလုံး နေရောင်ခြည် ကောင်းစွာရရှိလေ သောအခန်းလေးတွင် ကျွန်မနေပါသည်။ အခန်းသည် အစဉ်လိုပင် နွေးထွေးနေတတ်၏။ နွေအခါတွင် ပူပြင်း ကာ ဆောင်းတွင်တော့ ပြင်ပက အေးမြခြင်းကိုပင် မသိတတ်နိုင်အောင် ခပ်နွေးနွေးပင်ရှိသည်။ ညနေခင်း ရုံးက ပြန်ရောက်ချိန်၌ဖြစ်စေ၊ ညဥ့်နက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ သို့တည်းမဟုတ် နံနက်ခင်း အိပ်ရာက နိုးထလျှင်ဖြစ်စေ ကျွန်မသည် ဆောင်း၏ အငွေ့အသက်ကို နည်းနည်းမျှပင် မခံစားရပါ။ အေးမြလှသော ဒေသတွင် မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်သလို ဆောင်းသိပ်မပီပြင် သည့်မြို့၏ အတွင်းပိုင်းလိုနေရာတွင် နေရတာကြောင့်လားမသိ။ ရန်ကုန်ဆောင်းသည် သည်နှစ် သူတကာ စာဖွဲ့တတ်ကြသလိုဖြင့် ကျွန်မကို မပြုစားနိုင်ချေ။ သိပ်အေးတာပဲဟု ပြောတတ်သော မိတ်ဆွေများကို ရယ်ပွဲဖွဲ့လျှင် သူတို့၏ မျက်စောင်းများနှင့် ရင်ဆိုင်ရလေ့ ရှိပါသည်။ “အေးလေ နင်ကတော့ ဘယ်အေးပါ့မလဲ”ဟု ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Thursday, January 24th 2013. Under ကဗျာ, မျက်ရှု
fineartamerica.com ကျွန်မမှာ .. ကျွန်မကိုယ်တိုင်အတွက်ဆို မျက်ရည်တွေနဲ့ပဲ အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန် ပိုးပန်းခဲ့ရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေရှိတယ် ကျွန်မ ချစ်ရသူတွေအတွက်ဆို နှင်းမြူတွေကို ခပ်ပါးပါးလှီးချသွားတဲ့ နေခြည်ဖွေးနုနုလိုပဲ နွေးထွေးတောက်ပချင်နေခဲ့ဖူးတဲ့နေ့တွေရှိတယ် တစ်ချိန်တုန်းကတော့ အသံတွေဆူညံနေတဲ့ လမ်းမထက်မှာ နှလုံးသားရဲ့ မြည်တမ်းသံတွေကို သိမ်းဆည်းထုပ်ပိုးရင်း ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလောကဓံတွေကို မိတ်ဖွဲ့ရင်း သိမ်ငယ်ဖျော့တော့တဲ့ေ ခြေလှမ်းတွေနဲ့လဲ လျှောက်လှမ်းနေခဲ့ဖူးတာပေါ့ မြေပြင်နဲ့နီးနီးလာတိုင်း … မိုးတိမ်တွေပြည့်နှက်လာနေတဲ့ ကောင်းကင်ကိုမော့ငေးရင်း အစိုခံဘ၀ကံလက်က လွတ်မြောက်ရုန်းထွက်ချင်ခဲ့ဖူးတယ် တစ်ချို့တစ်ချို့တွေအတွက် မြေမှုန်လိုကျင့်ကြံပြီး တစ်ချို့တစ်ချို့တွေအတွက် နေလိုလလို ကျင့်ကြံခဲ့ရတယ် တစ်ချို့တစ်ချို့တွေအတွက် တော့ ကျွန်မက ဗီလိန်ပေါ့ တစ်ချို့တစ်ချို့တွေအတွက်ကျ .. အဖြည့်ခံသက်သက်ဖြစ်နေပြန်ရော ကိုယ့်ကိုကိုယ်အတွက်ကျတော့ ဆူးလှည်းကြီးတစ်ခုလိုနဲ့ ဘယ်သွားသွား တရွတ်တိုက် သြော် . .အပေးသာရှိပြီး အယူမရှိတဲ့လောကနဲ့ အယူသာရှိပြီး အပေးမရှိတော့တဲ့ လောဘရယ် ကျွန်မရှိုက်လိုက်တဲ့ သက်ပြင်းငွေ့တွေ ကမ္ဘာမြေအတွက် ပူလောင်ကျွမ်းမြေ့မှုမဖြစ်ပါစေနဲ့ ကျွန်မသောက်ရမယ့် ရေစင်အေးမြတစ်စက်ကလဲ အထီးကျန်အက်ကွဲတဲ့တေးသွားလေးတွေစပ်လို့ ရေခဲမြစ်ထဲကို တစ်စိမ့်စိမ့်တိုးဝင်သွား အရင်ကဆို .. အခုလို .. ကျွန်မ ခံနိုင်ရည်မမဲ့ခဲ့ဘူး အခုလို .. ကျွန်မ အကာအကွယ်မမဲ့ခဲ့ဖူးဘူး အခုလို .. ကျွန်မ .. အေးခဲကျွမ်းလောင်မနေခဲ့ဖူးဘူး ဘ၀အတွက် အားမာန်တွေ တက်ကြွတဲ့ခြေလှမ်းတွေ .. မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့ … ရင်ခုန်သံတွေတဖျတ်ဖျတ် ချစ်သူတစ်ဦးရဲ့ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုက ရန်သူတစ်ထောင်အားထက် ... Continue Reading
အမည်များရဲ့ နောက်ကွယ် (သားသို့ပေးစာ – ၁၂)
Published By Myat Shu On Wednesday, January 16th 2013. Under မျက်ရှု, ပေးစာ
ကဲ...သည်လိုဆိုရင် မြန်မာလတွေ ဘာကြောင့် တန်ခူး၊ ကဆုန်... တပေါင်းခေါ်သလဲဆိုတာ သားသိချင်လိမ့်မယ်။ ဖေဖေဖတ်မှတ်ထားတဲ့ထဲက သားလေးအလွယ်တကူ နားလည်နိုင်အောင် ရှင်းပြမယ် နော်။ မြန်မာလရဲ့ ပထမဆုံးလကို တန်ခူးလလို့ခေါ်တာ သားသိတယ်နော်။ သားလေး သိပ်ပျော်တဲ့လလေ။ သင်္ကြန်ရေကစားပွဲ ကျင်းပတာမို့ စာမေးပွဲကြီးဖြေအပြီး ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ ပျော်ရွှင်ပွဲမဟုတ်လား။
Published By Myat Shu On Thursday, January 10th 2013. Under မျက်ရှု, အက်ဆေး
ကျွန်မမှာ စုဗူး တစ်ဗူး ရှိပါတယ်။ တိတိကျကျ ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီ စုဗူးလေးဟာ ပလတ်စတစ် ကော်ဗူး အကြည်နဲ့ လုပ်ထားပြီး အောက်ခြေကနေ လှည့်ပြီး ဖွင့်လို့ရတဲ့ စုဗူးကလေးပါ။ အရောင်က အပြာကြည်ကြည်၊ ဗူးပေါ်မှာ ရေးထားတာကတော့ ဂျပန်ယန်းသင်္ကေတ စာလုံး ခပ်ကြီးကြီး တစ်လုံး။ပြီးတော့ စုဗူး အောက်ခြေကနေပြီး အပေါ်ထိ အတိုင်းအတာကို ပေတံတစ်ချောင်းမှာ ပြထားသလို စနစ်တကျလဲ ပြထားပါသေးတယ်။ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းအထိ စုထားတဲ့ အကြွေစေ့ အရေအတွက်ကို ခန့်မှန်းလို့ရအောင် အတိုင်းအတာလေးနဲ့ ပြထားတော့ စနစ်ကျလှတဲ့ စုဗူးလေးလို့ ပြောလို့ရတာပေါ့။ အရင်တုန်းက ကျွန်မ စုခဲ့ဘူးတဲ့ စုဗူးတွေက နို့ဆီဗူးသာသာရှိတဲ့ အလုံပိတ် သံဗူးလေးတွေဆိုတော့ ဗူးထဲမှာ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကို သိချင်ရင် ဗူးကို အသံမြည်အောင် ခလောက်ကြည့်ရတာမျိုး။ ပိုက်ဆံတွေ ဗူးထဲကို ထည့်လို့ မရအောင် ကျပ်သိပ်သွားတော့မှ ဗူးထဲမှာ ပိုက်ဆံတွေ ပြည့်နေပြီ ဆိုတာ မှန်းလို့ရနိုင်တာမျိုးလေ။
ဒီအချိန်မှာ ဆုံးသွားတဲ့ ဘိုးဘွားများကို သတိရမိပါတယ်။ သူတို့မြေးငယ်တယောက် အကယ်ဒမီ ဆိုတဲ့ ဆုကို ရတာ အဖိုးအဖွား တစုံပဲ သိနိုင်တော့တဲ့အဖြစ်ပါ။ မန္တလေးမြို့မှာ ဆေးရိုးအလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကုန်သည်လင်မယားက သားသမီး ၆ ယောက်အဖတ်တင် ရာမှာ ပေါက်ဖွားလာကြတာက စာပေ ဂီတ ရုပ်ရှင် နိုင်ငံရေး ဆေးဘက် အစုံ ဝင်ငံကြပါတယ်။ လူကြီးတွေ စာဖတ်တဲ့အိမ်တွေမှာ လူငယ်တွေ စာပေသုခုမ နှစ်လိုတာ မဆန်းပါ။ ပြောလိုတာက ဆုတွေ ဘာတွေ ရတာထက် စိုက်လိုက်မတ်တတ် ရှိကြပုံ။ ထင်ပေါ်တဲ့သူ တဦးကို လေ့လာရင် သူ့နောက်ခံကို လွတ်လို့မဖြစ်တာမို့ ဒါဟာ ကွန်ယက် အုပ်စုတွေနဲ့ သွားနေတယ် ဆိုတာ သတိပြုမိသင့်တယ် ... Continue Reading